रौनक नभएको दसैं : RajdhaniDaily.com
Home भर्खरै रौनक नभएको दसैं
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभावका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको र कोरोना संक्रमितको संख्या पनि दैनिक रूपमा गुणात्मक हिसाबले बढेको छ । समुदायमा थप संक्रमण फैलिएर त्रास बढिरहेको छ । यस्तो समयमा मनाइने दसैं विगत जस्तो नहुने भएको छ । यतिखेर हरेक व्यक्ति दसैंभन्दा पनि कोरोना संक्रमणबाट आफू र परिवारलाई कसरी बचाउने भन्ने चिन्तामा छन् ।
धेरैले भन्न थालेका छन्– कोरोना महामारीबाट बचियो भने यस्तो दसैं त अर्को वर्ष धुमधामका साथ मनाउँला । त्यसैले यसपालिको दसैंको रौनक हराएको छ ।
सामान्य समय भएको भए यतिखेर काठमाडौंका न्युरोड, असन, इन्द्रचोक, महाबौद्ध, दरबारमार्गलगायतका बजारमा खुट्टा हाल्ने ठाउँ हुँदैनथ्यो । सडकमा मान्छेको भीड, कपडा पसलमा नयाँ कपडा छान्नेको लर्को, सुन पसलमा गहना रोज्नेको लाइन र मोबाइल पसलमा नयाँ मोबाइल किन्नेको भीड हुन्थ्यो । जुत्ता, चप्पल, मसला, कपडा पसल, खसी बजारमा घटस्थापनाको दिनदेखि नै निकै चहलपहल हुन्थ्यो । अहिले विगतमा जस्तो दृश्य देखिएको छैन् ।
जुत्ताचप्पल, मसला, कपडा पसल, खसी बजारमा घटस्थापनादेखि नै निकै चहलपहल हुन्थ्यो । अहिले विगतमा जस्तो उत्साह देखिएको छैन ।
विगतका वर्षमा यहाँ उपभोक्ताले आफूलाई आवश्यक पर्ने सामान र दसैं तिहारका लागि आवश्यक सामान जोहो गर्न निकै तँछाडमछाड एवं घुइँचो नै हुन्थ्यो । त्यति मात्रै होइन, नयाँ गाडी, मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्नेहरूले दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे सवारी साधनका सोरुम घेरिरहेका हुन्थे । टिभी, फ्रिज, मिस्चर जस्ता विद्युतीय सामग्रीदेखि रङरोगन र घर टल्काउने उपाय खोज्दै दसैंका बेला बजारमा निस्किएका मान्छेको भीडले काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभरका सबै सहरका गल्लीहरूमा निकै चाप हुन्थ्यो । तर, यसपालिको दसैंमा त्यस्तो भीडभाड देखिएको छैन ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कहरले मुलुकको आर्थिक गतिविधि निकै धराशायी भएको र संक्रमण दर पनि उच्च रूपमा बढ्दै गएकाले अहिले अधिकांश मानिस दसैंको किनमेलमा निस्किएका छैनन् ।
काठमाडौंका न्युरोड, असन, इन्द्रचोक र महाबौद्धलाई राजधानीकै मुख्य बजारका रुपमा लिइन्छ । यी बजार कोरोना महामारीका कारण सुनसान जस्ते छ । दसैं सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्व मात्र नभएर किनमेलको पर्व पनि हो । व्यवसायीहरू पनि दसैंअघिको समयलाई ‘व्यावसायिक पर्व’का रूपमा लिन्छन् । अहिले सवारी साधन बिक्री गर्ने सोरुममा पनि विगतका वर्षको जस्तो चाप छैन ।
घरायसी सामग्री बेच्ने व्यापारीहरू पनि विगत ६ महिनादेखि बन्द कोठामा थुनिएका छन् । कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिमका कारण सरकारले नै अझै ठूलो संख्यामा मानिस जम्मा हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
दसैंमा सरकार तथा निजी क्षेत्रले आफ्ना कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकम दसैं खर्च (दसैं पेस्की) भनेर दिने परम्परा छ । जसले गर्दा जनमानसमा सामान्य अवधिमा भन्दा बढी पैसा आउने भएकाले त्यस्तो रकमलाई नयाँ वस्तु जोड्ने अवसरका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । तर, यसपालि निजी क्षेत्रमा कार्यरत धेरैले विगतका वर्षहरूमा जस्तो दसैं भत्ता पाएका छैनन् । त्यसले पनि व्यापार घटाएको सम्बन्धित व्यवसायीको भनाइ छ ।
यसैगरी, लामो समय विदेशमा रहेका नेपालीहरू दसैं–तिहार मनाउन स्वदेश फर्किने गरेका छन् । विदेशबाट फर्किएका नेपालीले घर फर्कंदा केही नयाँ सामान खरिद गरेकै हुन्छन् । तर, कोरोनाको त्रासले यसपालि अधिकांशले अत्यावश्यक सामान मात्रै खरिद गरेका छन् । अहिले विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू घरभन्दा पहिले आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक नियमका कारण अत्यावश्यक नपरी कुनै पनि वस्तु खरिदमा ध्यान दिन छोडेको उनीहरूको भनाइ छ ।
उपभोक्तामा शिथिलता आएपछि व्यापारीले मात्रै जाँगर चलाएर केही हुँदैन । माग पक्ष नबढी पूर्ति पक्ष नबढ्ने जानकारी गराउँदै अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले भने, ‘यो अर्थशास्त्रको सिद्धान्त हो । कोरोना संक्रमण दर उच्च भइरहेका कारण अहिले उपभोक्ता, उत्पादक आयातकर्ता सबै निराश छन् ।’ कोरोना त्रासकै कारण यसपालिको दसैंमा विगतका वर्षहरूमा जस्तो व्यापार हुने सम्भावना न्यून रहेको पाण्डेको भनाइ छ ।
जसका कारण अहिले अत्यावश्यकबाहेक हरेक वस्तुको माग लगभग शून्यमा झरेको छ । अर्कातर्फ सर्वसाधारणबीच पुनः काठमाडौंमा लकडाउन त हुने होइन भन्ने त्रासले पनि व्यवसायीले बढी सामान जोहो गर्न चाहेका छैनन् ।
अझै सरकारले कोरोना फौलने जोखिम भन्दै सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस खोल्न दिएको छैन । ६ महिनादेखि बन्द रहेको होटल सरसफाइ गरी माकुराको जालो पुछ्न थालेका छन् । अझै होटलमा ग्राहकको रौनक छैन । भर्खरै वायुसेवा कम्पनीहरूले पनि हवाई सेवा सुरु गरेका छन् । दसैंका लागि नयाँ प्याकेज सार्वजनिक गरेका छन् । तर, उपभोक्तालाई त्यस्ता कुनै पनि प्याकेज तथा अफरले छुन सकेको छैन ।
छैन दसैंलाई नयाँ नोट
दसकौंदेखि दसैंमा दक्षिणाका रूपमा प्रयोग गरिने नयाँ नोट यस पटक नपाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ संक्रमण उच्च दरले बढिरहेको र केन्द्रीय बैंककै पदाधिकारी पनि संक्रमणको सिकार भएकाले नयाँ नोट वितरण कार्यलाई स्थगित गरेको हो । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसहित विभिन्न विभागका कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भएसँगै यस वर्ष दसैंमा नयाँ नोट वितरण नगर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विगतका वर्षमा जस्तो अहिले नयाँ नोट वितरण गर्न सहज नहुने बताउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकरण भट्टले भने, ‘हामी यो वर्ष नयाँ नोट वितरण नगर्ने योजनामा छौं ।’
त्यसैको परिणाम हरेक वर्ष नयाँ नोट वितरणको सीमा घटाउँदै आएको राष्ट्र बैंकले यसपालि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लाई कारण देखाएर नयाँ नोट वितरण कार्य बन्द गरेको छ विगतमा दसैंको पहिलो दिनबाटै काठमाडौंका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकका शाखाहरूमा नयाँ नोट लिन सर्वसाधारणको निकै ठुलो भीड लाग्ने गरेको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । भीडमा बसेर नयाँ नोट लिन खोज्दा दसैंका बेला आफू पनि कोरोना संक्रमित भइन्छ कि भन्ने त्रासका कारण अहिले सर्वसाधारणले नयाँ नोटलाई त्यति महत्व नदिएको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ ।
विवेक विवश रेग्मी - June 20, 2021 0
काठमाडौं । कोरोना संक्रमण र यसको प्रभावका कारण देशभरका अधिकांश निजी विद्यालय संकटमा परेका छन् । प्याब्सन, ऐन प्याब्सनलगायतमा आबद्ध साना लगानीमा सञ्चालित निजी...
Editor-Picks टेनिस रोका - April 22, 2021 0
नगर प्रमुखलाई हातपात गर्नेलाई रिहाई गर्न माग गर्दै सप्तरी कांग्रेसको प्रदर्शन
राजविराज । आफ्ना निर्दोष कार्यकर्तालाई झुठा मुद्दा लगाई पक्राउ गरिएको भन्दै आईतवार नेपाली काँग्रेस सप्तरीले राजविराजमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । नेपाली काँग्रेस सप्तरीका...
सीमारक्षक जनताका नाममा
नेपाल र दक्षिणी छिमेकी देश भारतका बीचमा रहेको पूर्वी नेपालको सीमावर्ती इलाकामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले नेपालको भूमि मिची जबर्जस्ती पिलर गाडेको थाहा...
आज विहान यो वर्षकै बढी जाडो
प्रदेश ५ Rajdhani Daily - December 10, 2019 0
We woke reasonably la काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज विहान यो वर्षकै कम मापन भएको छ । न्यूनतम तापक्रम ५ डिग्रीसम्म मापन भएको...